Magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti haasi kufara nedanho rakatorwa nehurumende rekushandura mutemo unobata minda yekumaruwa ichiisa minda iyi pasi peminda yehurumende kana kuti state land, kuburikidza nemutemo we Statutory Instrument Number 51 of 2021.
Mutungamiri weTanzania, Va John Pombe Magufuli, Vashaya.
VaMagufuli, avo vanga vava nemakore makumi matanhatu nerimwe, vanonzi vashaikira pachipatara cheMzena Hospital muguta reDar es Salaam kuTanzania.
VaMnangagwa Vokurudzirwa Kubayiwa Nhomba yeCovid-19 Kuitira Kuti Veruzhinji Vave neChivimbo Nayo
Imwe nyanzvi munyaya dzehutano inoti zvakakosha kuti mutungamiri wenyika, Va Emmerson Mnangagwa, vabudewo pachena vachibayiwa nhomba iyi senzira yekukurudzira veruzhinji kuti vave nechivimbo nenhomba yakagadzirwa ku China iyi.
Vanhu Votanga Kubayiwa Nhomba neMuvhuro
Guta reBulawayo rakapihwa mishonga yenhomba inosvika zviuru gumi nezvitatu nemazana maviri, 13200, iyo ichatanga kupihwa vanhu nemusi weMuvhuro.
America Yovimbisa Kudyidzana neAfrican Union Zvine Pundutso Mukati
Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vatungamiri vemuAfrica vanofanirwa kutambira mashoko aVaJoe Biden zvine mutsindo nerukudzo mukati, uye vafunge zvakadzama kuti vangasimbaradze seyi hukama hwavo nehurumende itsva iri kutonga mu America.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Zvita 25, 2020
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitau, Zvita 23, 2020
Vanhu vari kutsigira mutungamiri we America, VaDonald Trump, mumashoko avo asina huchapupu ekuti sarudzo dzemuAmerica dzakabiridzirwa, vaswera vaine hurongwa hwekuratidzira munzvimbo dzakasiyana siyana muguta guru reWashington mudunhu re District of Columbia
Kutambidzanwa kweMasimba Pakati paVaTrump naVaBiden Koita Zvipingaidzo
Bazi reGeneral Services Adminstration, GSA, iro rinoona nezvekutambidzwana kwemasimba kuburikidza nekupa achangokunda musarudzo zvikanisiro, rinonzi harisati rapa chikwata chaVaBiden svumbunuro dzekuti chitange kushanda zviri pamutemo sezvinodiwa nemutemo wePresidential Transition Act of 1963.
Kusarudzwa kwaVaBiden Kwofadza MDC Alliance - North America Province
Sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America, VaTawanda Dzvokora, vanoti sebato, vanofara nekusarudzwa kwaVaJoe Biden naAmai Kamala Harris.